RW Rooble oo ka hadlay sida ay ku socoto doorashada – XAMAR POST
RW Rooble oo ka hadlay sida ay ku socoto doorashada
By Mohamed Abdi On Mar 11, 2022
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan la yeeshay safiirka Dowladda Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andre oo ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka dalka, iyadoo ay heer gebogebo ah mareyso doorashada xildhibaannada Golaha Shacabka ee BFS.
Ra’iisul Wasaare Rooble iyo Danjire Andre ayaa ka wada hadlay habsami u socodka doorashada iyagoo isla soo qaaday sida ay lagama maarmaan u tahay in doorashada xildhibaannada Golaha Shacabku ku soo idlaato xilligii ay horay ugu heshiiyeen madaxda Golaha Wadatashiga Qaranka ee 15-ka Maarso.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa soo dhaweeyay xowliga ay ku socoto doorashada, iyadoo ilaa hadda la doortay 80% xildhibaannada Golaha Shacabka.
Dhanka kale, waxaa uu sheegay in aan la aqbali karin dib u dhac kale oo doorashada ku yimaada, isagoo ka codsaday madaxweyneyaasha dowlad-goboleedyada in ay doorashada soo gebogebeeyaan ugu dambeyn 15-ka Maarso sidii horay loogu heshiiyay.
Shir u dhexeeya Ukraine iyo Ruush-ka oo maanta ka furmaya Turkiga
Mareykanka oo ku baaqay in deg deg lagu soo dhameystiro doorashada golaha shacabka